Bishnu Sharma: करोड क्लवले जोगाउला प्रतिष्ठा ?
अभिनेता सौगात मल्ल करोड क्लवका आकर्षक सदस्य हुन् जसको राप र तापमा नेपाली फिल्म बुर्कुसी मारिरहेको छ । ब्लकबस्टर ‘लुट’बाट प्रसिद्धी कमाएका मल्ल यतिबेला मायानगरीका एक्ला वृहस्पति हुन् । जो झन्डै दर्जनभन्दा बढी फिल्ममा प्रोटागोनिस्ट (मुख्य पात्र)को रुपमा अनुबन्धित छन् । सर्वाधिक आम्दानीमा कीर्तिमान राखेको ‘लुट’ले सवा तीन करोड मात्र कमाएन, सौगात र हाकु कालेको समानान्तर छवि निर्माण गरिदियो । उनलाई यतिबेला घरेलु फिल्मका डार्क हर्स मानिन्छ ।
फिल्म हिट हुन पात्र कि स्टार चाहिन्छ ? सौगात भन्छन् –‘नेपाली फिल्ममा दुवैको आवश्यकता देख्छु । बिरालो कालो या सेतो हुनुले केही फरक पार्दैन, मुख्य कुरा उसले मुसा मार्न सक्नुप¥यो ।’ नाट्य पृष्ठभूमिका यी खिरिला अभिनेताका हाइवे, रक्तचन्दन, बधशाला, सुनगाभा, एक अनटाइटल अमेरिकी प्रोजेक्ट प्रतीक्षित फिल्म हुन् । करोडभन्दा बढी कमाउने फिल्मको चर्चा गर्दा आउने करोड क्लवको सदस्यमा सौगात मल्लले नाम लेखाएलगत्तै फिल्म बजारीकरण र निर्माणका धेरै थरी कुरामा ब्यावसायिक आकार देखापरेको हो ।
आर्यन सिग्देल, करोड कमाउने फिल्मका पहिलो अभिनेता हुन् । ‘फस्टलभ’ले १ करोड ९० लाख ग्रस कमाउँदा आर्यन करियरको उत्कर्षमा थिए । तर, दुर्भाग्य ! उनी अभिनित पछिल्ला कुनैपनि फिल्मले लगानी रिकभर गर्न सकेनन् । पछि पनि आर्यन करोड लगानीका फिल्मका हिरो त बने तर, ब्यावसायिक शुन्यता मात्र हात लाग्यो । यतिबेला आर्यन आफ्नै लगानीमा फिल्म निर्माणको कसरतमा छन् । अहिले पनि थानकोटका यी रैथाने अभिनेता दर्शकीय रोजाइको प्राथमिकतामा छन् । तर, पात्र र अभिनय शैली बदल्नुपर्ने चुनौति उनीसामु छ ।
पूर्व इन्डियन आइडल प्रशान्त तामाङ करोड क्लव सदस्यमा नाम लेखाउने अर्का अभिनेता हुन् । उनी हिरो बनेको फिल्म ‘गोर्खापल्टन’ले २ करोड २० लाख ग्रस कमाएको हो । इन्डियन आइडल बनेलगत्तैको सफलता र प्रसिद्धिलाई प्रशान्तले यो फिल्मबाट आत्मसात त गरे तर, उनी अभिनित पछिल्ला दुबैवटा फिल्म फ्लप रहे । गायन पृष्ठभूमि र नेपाली भाषी भारतीय प्रहरीका जवान प्रशान्तले ‘गोर्खापल्टन’पछि प्रसिद्धि जोगाउन सकेनन् । समिक्षकहरु प्रशान्तको गोर्खापल्टन सफलतालाई आकस्मिता भन्छन् ।
पाँचौ सातामा २ करोड ५ लाख ग्रस आम्दानी गरेको फिल्म ‘सायद’ले बक्सअफिसमा सफलता मात्र पाएन, यसका टीनएज एक्टरद्धय संयम पुरी र विल्सनविक्रम राईले करोड क्लव ज्वाइन गरे । ‘सायद’ रिलिजअघि नै प्रसारित प्रोमोको समिक्षाबाट विल्सन र संयमले मिडिया हाइप बनाइसकेका थिए । टीनएज पनि फिल्मका मुख्य पात्र बन्न सक्छन् भन्ने शैलीको सुरुआत ‘सायद’ले गरेको छ । फिल्ममा संयमको अभिनय देखेर उनलाई अन्य निर्माता र निर्देशकले पनि अभिनयको प्रस्ताव गरेका छन् । ‘फिल्मले करोड कमाइसकेपछि मलाई हेर्ने र लिने आमदृष्टिकोणमा परिवर्तन भएको महसुस गरेको छु’ टीनएज एक्टरले भने, ‘सकेसम्म फिल्मलाई राम्रोसँग बनाउन र चलाउन सकियो भने यसले कलाकारको पनि हित गर्छ ।’ फिल्ममा संयमले लागुऔषध सेवन गर्ने प्लस टु विद्यार्थीको भूमिका पस्किएका छन् ।
अभिनेता मात्र होइनन्, करोड क्लवमा अभिनेत्री पनि अटाएका छन् । ‘फस्टलभ’ले गतिलो पैसा कमाएन मात्रै, हिरोइन निशा अधिकारीलाई रजतपटमा स्थापित गरिदियो । निशा यतिबेला नम्बर वान रोजाइकी अभिनेत्री हुन् । ‘फस्टलभ’बाटै ऋचा शर्माले अभिनय करियरको थालनी त गरिन् तर, निशासामु उनी गौण रहिन् । यो फिल्मको सफलताको क्रेडिट निशाले लिइदिइन् । ‘चपली हाइट’ हिरोइन विनिता बराल करोड क्लव ज्वाइन गर्ने अभिनेत्री हुन् जसको डेब्यु फिल्मले पैसासँगै विवाद पनि कमायो । विनिता अभिनित ‘फुलस्टप’ रिलिजको तयारीमा छ ।
लगानीको महंगो युद्ध सुरु भएसँगै फिल्ममा करोड क्लवको चर्चा सुरु भएको हो । कलाकार लिने प्यारामिटर मात्रै होइन कलाकार स्वयमको करियरसँग सम्बन्ध भएकाले पनि धेरैले यसलाई खासरुपमा लिने गरेका छन् । ‘फेसनको रुपमा करोड क्लवको चर्चा सुरु भएको छ’ अभिनेता दयाहाङ राई भन्छन्, ‘यसलाई मैले फेसन, करियर र प्रतिष्ठाको रुपमा लिएको छु । राम्रो अभिनय मात्र पर्याप्त होइन, यसका लागि ब्यावसायिक सफलता पनि जरुरी छ ।’ फिल्मले करोड कमाएर मात्र सेलिव्रिटीको स्टाटस कायमै रहिरहेको भने छैन । प्रशान्त तामाङ र आर्यन सिग्देल यसका उदाहरण हुन् ।
‘कलाकारको स्टारडम दर्शकीय रोजाइमा निर्भर हुने गर्छ’ अभिनेता अनुप बराल भन्छन्, ‘सफलतामा टिकिरहन दर्शकीय मनोविज्ञानमा आएको परिवर्तनलाई बुझेर अघि बढ्न सक्नुपर्छ ।’ आफूलाई अभिनेताभन्दा पनि स्टारको रुपमा लिने प्रवृत्ति र एउटै पात्रमा बाँचिरहने बानीले कलाकारको व्यावसायिक सफलतामा प्रभाव पार्ने ठम्याइ उनको छ । के करोड क्लव कलाकारको मागिखाने भाँडो हो ? व्लकबस्टर ‘लुट’ अभिनेता मल्ल भन्छन्, –‘एक हदसम्म यो कुरा सहि हो तर, सबथोक होइन । हात्तीको देखाउने दाँत र चपाउने दाँतजस्तै हो ।’
Posted by Sharma Bishnu at 3:05 AM